ITheku lingase lilahlekelwe yimidlalo yama-Commonwealth ngo-2022 | News24
ITheku lingase lilahlekelwe yimidlalo yama-Commonwealth ngo-2022
Cape Town – IDolobha iTheku lingase libe sebungozini bokulahlekelwa ukusingatha imiDlalo yama-Commonwealth ngonyaka ka-2022, lokhu kudalulwe uMengameli we-SASCOC, u Gideon Sam.
Ngokombiko we- Eyewitness News, iTheku lingase liphucwe le midlalo, ngaphandle uma lihlangabezana nemibandela eminingi ngomhlaka 30 kuNovemba.
OLUNYE UDABA: Imibono eyehlukene ngowamaCommonwealth
Phakathi kwezinye zezingqinamba ezivelayo kubalwa ukuthi imidlalo yama-Commonwealth ngo-2022 ayikabi nalo ikomiti eliyihlelayo kuleli kanye nokuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika nawo awukaziqinisekisi izinhlelo zokukhokha okukanye ukhokhe imali kwi-Commonwealth Games Federation (CGF).
“Isimemezelo singaya noma ngakuphi ukusho ukuthi sesikulungele ukuqhubekela phambili, noma sesibheke izimo zethu kanye nezinsiza ezweni futhi sizizwa sengathi akumele siqhubekele phambili,” kusho uSam engeza ngokuthi balindele ukuthola impendulo ungakadluli umhlaka 30 kuNovemba.
Uma iTheku ligcina lisingathe le midlalo kuzoba ngokokuqala emlandweni le midlalo isingathwa yidolobha lase-Afrika.